Way adag tahay in Omicron uu si buuxda u hareer maro ilaalinta tallaalka, ayay tiri WHO - Jowhar somali news leader
Way adag tahay in Omicron uu si buuxda u hareer maro ilaalinta tallaalka, ayay tiri WHO
By hanad	 On Dec 8, 2021
Kala duwanaanshaha Omicron wuxuu u muuqdaa mid aan ka liidan noocyada kale ee coronavirus aadna uma badna inuu gabi ahaanba hareer maro ilaalinta tallaalka, saynisyahano sare oo ka socda WHO iyo Mareykanka ayaa sheegay Talaadadii iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada caafimaadka bulshada.
Qiimaynta rajooyinka leh ayaa timid iyadoo walaaca caalamku uu ka kordhay kala duwanaanshaha is-beddelka ee coronavirus, kaasoo ku qasbay daraasiin waddamo ah inay dib u soo rogaan xannibaadaha xuduudaha isla markaana sare u qaaday suurtagalnimada dhaqaale ahaan lagu ciqaabayo qufullada soo laabanaya.
In kasta oo ay u badan tahay inay ka gudbi karto noocyo hore, haddana waa “wax aan macquul ahayn” in Omicron uu gabi ahaanba hareer maro ilaalinta tallaalka, taliyaha labaad ee Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa u sheegay AFP.
“Xogta hordhaca ah ma tilmaamayso in tani ay ka sii daran tahay. Dhab ahaantii, haddii ay wax jiraan, jihada ayaa ku wajahan khatar yar, “ayuu yiri madaxa xaaladaha degdegga ah ee WHO Michael Ryan.
Isagoo ku adkeysanaya in cilmi baaris dheeri ah loo baahan yahay, Ryan wuxuu sheegay inaysan jirin calaamado muujinaya in Omicron uu gabi ahaanba hareer marin karo ilaalinta ay bixiyaan tallaallada Covid ee jira.
“Waxaan haynaa tallaalo wax ku ool ah oo la muujiyey inay wax ku ool u yihiin dhammaan noocyada ilaa hadda, marka loo eego jirro daran iyo isbitaal dhig… xogta. oo ka yimid Koonfur Afrika, halkaasoo markii ugu horreysay laga soo sheegay xanuunka.
Si kastaba ha noqotee, Ryan wuxuu qiray inay suurtagal tahay in tallaalada jira ay waxtar yar u yeelan karaan kahortagga Omicron, kaas oo leh in kabadan 30 isbeddel oo borotiinka taranka ah kaas oo dhibcaha dusha sare ee coronavirus u oggolaanaya inuu galo unugyada.
‘Kama sii daran’ Delta, ayuu yidhi Fauci
Saynisyahanka caanka ah ee Mareykanka Anthony Fauci ayaa ku celceliyay ra’yiga WHO, isagoo sheegay in Omicron uu u muuqday mid ka xun noocyadii hore ee ku saleysan tilmaamaha hore, ayna suurtagal tahay inuu ka khafiifsan yahay.
Baasaboorka Soomaaliga oo ka awood badan qaar ka mid ah…
Kala duwanaanshiyaha cusubi waa “si cad oo aad loo gudbin karo”, oo ay u badan tahay inuu ka badan yahay Delta, oo ah nooca adduunka ugu badan ee hadda jira, Fauci ayaa u sheegay AFP.
“Runtii kama darna Delta,” ayuu raaciyay. “Waxaa jirta wax soo jeedin ah oo laga yaabo inay xitaa ka sii darnaan karto.”
Laakiin waxa uu xusay in ay muhiim tahay in aan si weyn loo fasirin xogtan sababtoo ah dadka la raacayaa waa kuwo da’yar oo ay u badantahay in isbitaal la dhigo. Cudurka halista ah wuxuu kaloo qaadan karaa toddobaadyo inuu ku soo baxo.
“Markaa marka aan infekshanno badan ka qaadno adduunka intiisa kale, waxay qaadan kartaa waqti dheer in la arko heerka darnaantiisa.”
Hay’adaha Midowga Yurub waxay taageeraan isku-habaynta iyo isku-habaynta
Ogaanshaha kiisaska ugu horreeya ee Omicron bishii hore waxay ku soo beegantay koror lama filaan ah oo ku yimid tirada cudurrada adduunka oo dhan, kala duwanaanshiyahana wuxuu sii huriyay welwelka laga qabo dib u soo kabashada caalamiga ah ee Covid-19.
Hay’adaha caafimaadka ee EU-da ayaa sheegay Talaadadii in isku dhafka iyo ciyaarta tallaallada ‘Covid-19’ ee la ansixiyay loo isticmaali karo labada koorsooyin bilow ah iyo qiyaaso xoojin ah iyadoo gobolku uu la dagaallamayo qulqulka kiisaska ka hor xilliga kirismaska. .
Caddaynta ayaa soo jeedinaysa in isku darka tallaalada fayraska fayraska iyo tallaalada mRNA ay soo saaraan heerar wanaagsan oo difaaca jirka ah oo ka hortaga coronavirus-ka sababa Covid-19, ayay yiraahdeen Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA) iyo Xarunta Yurub ee Kahortagga iyo Xakamaynta Cudurrada (ECDC) hadal.
Covid-19 wuxuu dilay in ka badan 5.2 milyan oo qof adduunka oo dhan tan iyo markii coronavirus-ka lagu dhawaaqay dabayaaqadii 2019, saynisyahannada iyo khubarada caafimaadku waxay sheegeen in tallaallada iyo sii wadida fogeynta bulshada ay yihiin furaha. si looga adkaado cudurka.
hanad 6721 posts
Burkina Faso: Prime Minister Dabire and government ousted
Britain’s Johnson is fighting for survival after new revelations about…
Burkina Faso earn their first points of the tournament by beating Cape…